Wararka - Sida loo rakibo xayndaabka gaariga
Mararka qaarkood marka uu bakhtigu xumaado oo ay dhacdo in uu roob uun da'o, baabuurka mulkiilaha ahi waxa uu inta badan ku firdhiyaa dhooqo iyo ciid marka uu gaadhigu wado, taas oo ka dhigaysa in gaadhigu u ekaado mid si gaar ah u wasakhaysan, in badan oo baabuurta leh ayaa inta badan dooranaya in ay ku xidhaan baabuurka? Haddaba waa maxay habka loo rakibo fenderka?
Gawaarida baabuurka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa saxan caag dhoobo ah, sida magacaba ka muuqata waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro dhulka marka baabuur-wadidda lagu rusheeyey dhoobo, waxaa la dhihi karaa ilaa xad si loo hubiyo in jirka nadiifka ah, sidaas darteed milkiilayaasha garanayaan habka rakibaadda baabuurka? Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa hordhac kooban.
Fender in shuruudaha layman ee, dhab ahaantii, waxaa lagu rakibay dibadda ee jir giraangiraha gaariga ka dambeeya qaab dhismeedka saxan ah, sida ay dhibcood wax, waxaa loo qaybin karaa biraha biraha, caleenta lo'da, caag caag ah iyo caag caag ah, laakiin sababta oo ah inta badan milkiilayaasha baabuurta. waxay raadinayaan agab dhaqaale iyo kuwo waara, sidaa awgeed caag ka samaysan ayaa waxaa isticmaala dad badan oo baabuur leh.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ay leedahay in baabuurka lagu dhejiyo daahyada, ma aha oo kaliya in la ilaaliyo nadaafadda jirka ilaa xad, laakiin sidoo kale si looga hortago in dhagxaan yaryar oo ku dhufto jirka baabuurka, waxyeello u geysta rinjiga. Ogsoonow in milkiilaha baabuurka ka hor intaadan rakibin fenderka si aad u hubiso inaad gadato xayndaabka isla nooca baabuurka. Sidaas darteed saameynta rakibaadda waxay gaari doontaa heerka qanacsanaanta milkiilaha.
Ilaa inta habka saxda ah ee rakibidda uu sidoo kale noqon karo mid aad u fudud, ugu horreyntii, mulkiiluhu wuxuu u baahan yahay qalab diyaarin ah, oo leh muraayad fidsan, iskutallaabta iskutallaabta iyo isugeynta is-taajinta. Milkiilayaasha waxay ku arki karaan fenderka qaybo ka mid ah waxaa jira birta birta ee dabada ee go'an, ka dibna birta lagu rakibay ee gadaasha dambe ee ka soo horjeedda daloolka furka ee aan la rarin, oo lagu rakibay kaashawiito plum ah dusheeda, si aadan u baahneyn inaad feerto. dalool jidhka ka mid ah iyo xayndaabka lagu dhejiyay jidhka baabuurka. Kaashashka kale waxay ku adkaan karaan oo kaliya in ay xirto daboolka, haddii aysan wanaagsanayn, marka hore waxaad isticmaali kartaa ciddi is-taajinta caadiga ah si aad dalool u sameyso. Inta kale ee tillaabooyinka waa kuwo aad u fudud, milkiilaha kaliya wuxuu u baahan yahay inuu raaco tillaabooyinka si uu u dhamaystiro. Waa in la ogaadaa in aan si indho la'aan ah u rumaysan qaar ka mid ah shaqaalaha dukaanka dayactirka ayaa sheegay in, ka fikir haddii rakibidda waa in laga saaraa taayirrada, habkani waa hab khaldan, baahida loo qabo in fiiro gaar ah loo yeesho milkiilaha gaariga.